Isoftware-Iphepha le-3 -iWindows 11 Iingcebiso, amaqhinga, ukuPhucula iMiyalelo, iividiyo
24. Julayi 2020
IMicrosoft Defender Antivirus: Jonga iifayile kunye neefolda ngesandla
IMicrosoft Defender Antivirus iqinisekisa ukhuseleko phantsi kweWindows 10. Ikhusela ikhompyuter kwiintsholongwane, i-malware kunye nezinye izinambuzane. ...
Khusela i-Excel ngegama elinegama eligqithisiweyo- Encryptbook works with password
Ngenkqubo ye-Excel spreadsheet esuka e-Ofisini, unokukhusela incwadi yakho ngegama eligqithisiweyo. IMicrosoft ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela ...
12. Meyi 2020
I-5KPlayer -Simahla ye4K player yeHD Windows 10 ukudlala nokusasaza
I-5KPlayer sisoftware player yevidiyo yasimahla enomsebenzi wokuhlela ividiyo. Ifilimu engenangxaki ye-4K / 5K kunye ne-8K ...
29. Epreli 2020
ICamtasia Studio 2020 ikhutshiwe
Ngaba ukhe wacinga ngokwenza imiyalelo? Ngaba uhlala ufuna ukuthatha umfanekiso wakho ngelixa udlala? Hlela iividiyo, usike, umboniso wesilayidi ...
12. Matshi 2020
Indlela yokusebenzisa abalinganiswa abakhethekileyo kwiOfisi yeLizwi
Xa usebenza noMicrosoft Office Word, kukho amaxesha apho ufuna ukusebenzisa abalinganiswa abakhethekileyo. Kodwa phi…
10. Matshi 2020
Isoftware yeklabhu- ndiyilawula njani iklabhu yam kwi-intanethi?
Kule mihla yobugcisa, yonke into inokwenzeka! Ungaqala isicoci sakho sokucoca iofisi, cela i-Alexa ...
7. Matshi 2020
Yenza utyikityo kwi-Outlook-Nantsi indlela
Sikubonise ixesha elide ukuba unokwenza njani utyikityo kwiWindows Mail. Utyikityo luvela ...
22. Fe bruwari 2020
Cwangcisa i-DIN A5 kwaye uyiprinte ngeMicrosoft Word
KwiMicrosoft Word, i-DIN A5 yifomathi eyaziwayo kakhulu. Akusoloko kufuneka ukuba ibe yifomathi yeklasi eyi-A4 ...
10. Fe bruwari 2020
Faka iiPlagi zoMlawuli ezipheleleyo- Nantsi indlela
Umlawuli opheleleyo Le nkqubo iphuhlisiwe kwaye iyaqhubeka kangangeminyaka. ...
1. Fe bruwari 2020
Impazamo ye-Outlook 550- ungayilungisa njani
Ukuba i-Outlook ibonisa Impazamo yomyalezo wempazamo u-550, kukho ingxaki yokuthumela i-imeyile. Uyawubona lo myalezo ...
Kwiiyure eziyi-15 ezidlulileyo